भर्खरै ! भेटियो यति ठुलो प्र’माण दाजु भाईलाई यसरी गरेका रहेछन् – ramechhapkhabar.com
भर्खरै ! भेटियो यति ठुलो प्र’माण दाजु भाईलाई यसरी गरेका रहेछन्
दुई दिनदेखि हराइरहेका दाजुभाइ मृ’ता वस्थामा फेला परे पछि प्रहरीले घ’टनाको अनुसनधान सुरु गरेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका–२ का २६ वर्षीय विजयबाबु पौडेल र उनका भाइ २१ वर्षीय सङ्गम पौडेल बुधबार साँझ मृ’ता वस्थामा फेला परेका हुन् । दाजु विजयको डेढ महिना अघि मात्र विवाह भएको थियो ।
श्रीमानको बारेमा राम्रोसंग बुझ्न पनि नपाउँदै कलिलै उमेरमा विजयको श्रीमतिको सिन्दुर पु’छिएको छ । प्रहरीले दुई जनाको श’व फेला पारेको भएपछि घ’टनास्थलमा ३ वटा कट्टु फेला परेपछि घ’टना र’ह’स्यमय भन्दै परिवारका सदस्यले शुष्म अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।’
निकै अप्ठेरो ठाउँमा रहेको पोखरीमा दुई जना मात्र जान नसक्ने भन्दै उनीहरुको ज्या’न लि’इ’एको हुनसक्ने आ’शंका परिवारको छ । जिल्लाप्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लका अनुसार सोमबार बिहानदेखि उनीहरू हराएका थिए । दुवै जनाको श’व बुधबार साँझ करिब सात बजेको समयमा गैँडाकोट–३ स्थित जयश्री खोलाको बाँधमा फेला परेको हो ।
प्रहरी उपरीक्षक मल्लका अनुसार एक जनाको श’व खोलाको बाँधमा तैरिएको र अर्कोको श’व डु’बेको अवस्थामा फेला परेको हो । दुई दिनदेखि हराइरहेका उनीहरुको खोजी गर्ने क्रममा मृ’ता वस्थामा फेला परेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताउनुभयो । निधनको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए ।